A inani yommiselo
トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ A inani yommiselo
Kodwa yinkqubo ukuba ixabiso lilonke imimiselo nayo ebidlalwe kumaphephandaba kunye neendaba kumzuzwana odlulileyo, ngoko kude abantu abangazange abe nendawo phakathi amatyala, bekuya kuba abantu abaninzi emhlabeni awuyazi into kulawulwa.
Eli xesha, kuba isixa yommiselo, siza kwazisa imvelaphi eyaba ithuba ukuze babone imixholo yawo.
Yintoni na ulawulo mali iyonke?
inani ummiselo, xa ubhalisela ukuboleka, onetyala lo umyalelo ichaza ukuba kuphela phezulu ukuya kwesinye kwisithathu sengeniso yonyaka owukwazi ukuboleka imali. I
Ngokukodwa, emva ngokwesinyanzeliso kwimeko yabasebenzi salaried yengeniso yonyaka million 3.6, akayi kuba nako ukuboleka kuphela ukuya ku-1.2 million yen.
Oku, ukuba, akusayi kuba into efanayo njengoko ubhalisela inkampani ngaphezu kwesinye unako ukwenza ityala ngaphezulu kwe 120 million.
Ukongeza, xa isicelo ukuboleka entsha ezimalini yabathengi, isixa-mali sisonke yommiselo nangaxeshanye nazo nokungeniswa isiqinisekiso yengeniso ukongeza kwiimviwo eqhelekileyo belikufuna.
Ezi ukongeza kwimali kubathengi, nayo kule nkampani ngetyala okanye ikhadi lekhredithi inkampani, bendiya kuthi ukuba Akumangalisi umthetho eqhelekileyo kuba le nto iza kusetyenziswa.
ummiselo mali iyonke wazalwa imvelaphi
Isizathu sokuba umthetho mali
iyonke wazalwa, inento yokwenza loo mntu ukuba enze self-ungonakala liye landa. Phakathi izinga lenzala, ebizwa ummandla ezingwevu
nokunyanzeliswa eyadlulayo, unako ukuyenza le Finance ngumsebenzisi onengqiqo ukuba kukho isixa esithile semali, naliphi na inani yokuboleka.
Ngenxa yoko, ithi umntu wakhathazeka mali ukuphendula ukudodobala le ukuthambeka ukuba inani lamatyala usebenzisa nemali yabathengi ukwanda.
Noko ke, isicwangciso lokuhlawula zomntu waboleka Mamanarazu, ngenxa yokuba waba tyala ngakumbi nangakumbi ukuba snowball ngokukhawuleza, ewe ke kwakhona abaliqela ukuba ubomi iba Mamanaranaku.
kulo mkhuba, le unetyala lokuba enze self-yimali liye landa, uninzi lwemali yomthengi kunye nolawulo Machikin uye engqongqo.
yoko, Machikin ezifana sele imiliselwe kulo mmandla, oko ayinayo ubuncinane apho isenzo uye yimali Mamanarazu.
Ngamanye amazwi, nokuba nezakhono kwi ubuye kumenza abantu ebolekiweyo, thina sobabini kwi imeko umthetho sele kunokuba Yuka ime kakuhle.
Ngoko ke, urhulumente ngoku nokunika elinye umgca ngohlobo kolawulo mali iyonke.
njengoko icala njengomsebenzisi, kodwa usenokuba uvakalelwa inxalenye lingavumi awukwazi ukwenziwa uyaboleka kuphela ukuba isixa esithile semali, kwelinye icala akukho ndlela urhulumente into embi kukuba kuthi ukuba siyeke ngaphambi esihogweni amatyala xiang.
Ngaphandle ezingummiselo mali iyonke
Ngale ndlela, imali iyonke ummiselo umthetho kubalulekile ukuba ngezimali umntu umntu omnye akwazi ukufumana anqongophele.
Noko ke, kukho kwakhona ityala apho lo ummiselo ngaphandle.
ngaphezu kwabo ezithile, ezifana nezivumelwano zokubambisa yaye i-mboleko auto, lo gama yokuthenga elikhulu kunene, kodwa abo ulwalamano olusondeleyo ebomini.
kwakhona, ukuze abo ukunakanwa umnyinyiva zizonke zisisixa se ummiselo, nazo ziquka ukubolekisa mali zoshishino.
Oku Ongayinikeliyo neendleko zokuphila, kujongwe ukuba indlela uboleka nabanini bamashishini mali zoshishino. Ukuze
ufumane evunyiweyo, kuba ifuna ncakasana ukungeniswa isiqinisekiso yengeniso, ngexesha isicelo kufuneka owalungisa lokubuyiswa kwerhafu kunye nesatifikethi yokuhlawula irhafu.
Ukongeza, eboleka kulo mgaqo, iibhanki kunye neemanyano zeentengo zemboleko engabandakanywanga kwisixa yommiselo.
ithelekiswa nemali yabathengi, nangona inombolo yoviwo leentsuku kuthatha Ububi obunjalo, ndiza kuthi ukuba kukho kwakhona ukuba uzame ukukhetha xa ufuna ukuboleka imali ethile.
Kakade, ezingalawulwayo Oku akuthethi imali engenasiphelo kubolekwe.
ngakumbi, kuba kwimeko abantu baye bagcina abanamatyala ukusa kumkhamo othile, ngenxa yokuba uviwo iba nkulu, kukho iimeko ezininzi apho nga ha endleka a yoko.
ezinxulumene / imali ebolekiweyo kwi ibhanki sakho
ezinxulumene / imali ebhankini
ummiselo mali iyonke ke sum of ityala lo umthetho, leyo ichazwa-yesithathu enye imali yonyaka qondo liphezulu.
Ukongeza, ngokuxhomekeke kwisixa zokuboleka Kukho amalungiselelo, afana efuna isiqinisekiso ingeniso.
ulawulo nomthamo kakhulu isicelo ezifana nemali kunye yomboleki yeentengo zemboleko amakhadi, kunye nemali zoshishino kwi abanini mashishini abazimeleyo, uya kuxolelwa ngokunxulumene ngokuboleka ebhankini.
Oku kuthetha ngamandla ukuba ngokokubona neebhanki kunye namashishini sele benze, oko akukho nangayiphi na indlela ukuba imali waboleka mda.
wokugqibela, ekubeni Kucingelwa ukuba uboleke imali kwi intlawulo kunokwenzeka uluhlu yaso, kubalulekile ityala ngenyameko iza kuqwalaselwa ngononophelo.